🥇 ▷ Nintendo: Mario Kart Tour waxaa la sii deyn doonaa 25.9. loogu talagalay Android iyo macruufka ✅
Nintendo: Mario Kart Tour waxaa la sii deyn doonaa 25.9. loogu talagalay Android iyo macruufka
Sida Nintendo uu ku dhawaaqay, taleefanka gacanka ee Mario Kart ee cinwaankiisu yahay Mario Kart Tour waxaa la sii deyn doonaa Sibtember 25, 2019 ee loogu talagalay Android iyo iOS. Asal ahaan, Nintendo ayaa horay u soo bandhigtay ciyaarta bishii Feberaayo 2018 waxayna balan qaaday inay sii deyn doonto ugu dambayn bisha Maarso 2019 ugu dambeyn.
Si kastaba ha noqotee, si loo sii wanaajiyo ciyaarta ka hor inta aan la sii deynin oo la sii ballaariyo waxyaabaha ay ka kooban tahay ka dib bilawgii, Nintendo wuxuu ku dhawaaqay dib u dhac ku yimid Janaayo sannadkan. Shirkadda waxay ka hadashay daabacaad “xagaaga 2019” oo waxaa ku qornaa taariikh cayiman. Tani waxay daba socotaa 25ka Sebtember 25, xisaabta rasmiga ah ee Twitter-Account-ka ee loogu talagalay Mario Kart Tour,
Ku biloow suurtagal la’aan multiplayer dhab ah
Laga soo bilaabo beta xirmay, Nintendo ayaa horey u soo qabtay, waxaa horeyba loo ogaa inuusan Mario Kart Tour u oggolaan doonin kumbuyuutarro dhab ah waqtiga dhabta ah ee ka dhanka ah ciyaartoy kale oo casriga ah. Qaybta beta, ciyaartoydu waxay kaliya la tartami karaan ka soo horjeedka jinsiyadaha kale ee duuban. Haddii tani isbedelay ilaa sii-deynta ciyaarta ama cusboonaysiinta ayaa bixin doonta qaab multiplayer aan wali la garan. Si kastaba ha noqotee, Nintendo wuxuu jeclaan lahaa inuu sii wado wadaagida wararka ku saabsan ciyaarta ilaa inta laga helayo bisha Sebtember.
Fiidiyowyo cusub ayaa muujinaya jidad caalami ah
Nintendo wuxuu sidoo kale sii daayay labo fiidiyow oo cusub oo ku saabsan ciyaarta taas oo qeyb ka ah ogeysiiska, kaasoo bixiya aragti dheeri ah oo ku saabsan raadadka lagu qaabeeyey meelihii laga bartay adduunka oo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah looga soo bandhigay.
Isku-diiwaangelinta horudhaca ah ee Android iyo macruufka macquulka ah
Labada isticmaale ee Android iyo macruufka waxay geli karaan Google Play Store iyo Apple Pre-diiwaangelinta App Store ee ciyaarta. Sida Super Mario Run, nooca aasaasiga ah ee ciyaartu waa bilaash, laakiin inaad ku sii wadatid ciyaar ilaa xad ah ciyaarta waxay u baahan tahay soo iibsi gudaha ah. Kuwani waa sida laga soo xigtay App Store ee Apple inta u dhexeysa 2 iyo 70 doolarka Mareykanka ah. Faahfaahinta iibsiyada-in-app iibsashada iyo qiimaha shaqsi weli lama oga.